Safarkii Emailka ee Inboxka | Martech Zone
Thursday, April 26, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Kaliya waxaan ka wada hadalnay tababarka webinar ee ku saabsan tababarka suuq-geynta waxyaabaha maanta la joogo shirkad waddani ah sida naqshadaynta emaylka iyo waxqabadka suuqgeynta iimaylka ayaa isbadalay sababtuna tahay habka macaamiisha ay wax u bixiyaan iyo sidoo kale sida aaladaha moobaylku u soo diraan emaylka. Iyadoo 30% e-mayllada lagu akhrinayo aaladda moobaylka, way ka muhiimsan tahay sidii hore si loo qorsheeyo emaylladaada si habboon… loona tijaabiyo!
Eray bixinta emaylka wali way khaldami kartaa, xitaa ku hubaysan aqoontaan. Caado ka dhig inaad tijaabiso fariin kasta oo aad u dirto macaamiisha emaylka waaweyn intaadan dirin. Litmus wuxuu bixiyaa 7 maalmood tijaabada emailka dhammaan macaamiisha cusub!
Waxay sidoo kale ku soo ururiyeen xogtan faa iidada leh wadada emaylku u geynayo sanduuqa, maxaa khaldami kara, iyo sida aad u hagaajin karto!
Tags: gaarsiintaemailgaarsiinta emaylkasafarka emaylkahaya'ad emailimtixaanka emaylka